UMeraki Mazunte w / air conditioning imibhede engu-2 nebhayisikili - I-Airbnb
UMeraki Mazunte w / air conditioning imibhede engu-2 nebhayisikili
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Sabdy
I-Meraki, Indawo yokuhlala enhliziyweni ye-Mazunte!
Itholakala ngamamitha angama-200 ukusuka ogwini olukhulu lwaseMazunte, imizuzu eyi-8 ngezinyawo.
Ukusuka lapha uzobe useduze ngangokunokwenzeka nomgwaqo omkhulu waseMazunte kanye nedumela elithi "El Rinconcito" lapho iningi lezindawo zokudlela, izitolo zokudla, izithuthi zomphakathi zikhona.
Kuyindawo ezimele ngokuphelele lapho uzothokozela ubumfihlo nokuthula, inakho konke okudingayo ukuze uchithe izinsuku ezinhle nawe noma nabangane bakho.
Egumbini kuzodingeka konke okudingayo uhlangothi, it has a embhedeni usayizi wenkosi futhi umbhede double, izingubo zokulala, amathawula, uphahla fan kanye air conditioning, hlupha kagesi, ikhofi umenzi, blender, esiqandisini futhi nensimbi yokwensimbi izingubo, umhubhe e ongahlala futhi ujabulele ukuphuma kwelanga, ukushona kwelanga nanoma yisiphi isikhathi sosuku, futhi inendawo yokupaka imoto yakho, asinawo umbono wolwandle!
Into engcono kakhulu ukuthi umnyango uzimele ngokuphelele futhi igumbi liyimfihlo.
Njengamanje sithatha zonke izinyathelo ezidingekayo zokubulala amagciwane futhi sisebenzelana nezivakashi zethu, siqiniseke ngokufinyelela indawo yokuhlala elandela imigomo eshiwo yi-WHO.
Igumbi lisenkabeni yeMazunte.
Isikhumulo sezindiza esiseduzane yiHuatulco, cishe imizuzu engama-45, noma iPuerto Escondido, cishe ihora elingu-1 nemizuzu eyi-15.
Igumbi litholakala ezinyathelweni ezimbalwa ukusuka emgwaqweni omkhulu waseMazunte lapho ungathola khona izindawo zokudlela, amabha, amabhikawozi, izitolo zokudla, isitolo sezandla, njll. Izithuthi zomphakathi "ama-chiveritas namatekisi" zilapho, lapho ungaya khona eZipolite, San Agustinillo, Puerto Angel, Pochutla naseSan Antonio.
Kumamitha angama-200 ulwandle olukhulu lwaseMazunte.
Kunezinto ezimbili ezibaluleke kakhulu ongeke uziphuthele:
Iphoyinti le-Cometa nokuvakashela i-National Turtle Museum.
Ngesikhathi sokufika kwakho, hlala ekamelweni lethu ngizotholakala amahora angu-24 ukuphendula yonke imibuzo, ngocingo noma imilayezo.